ITIL oru ngo Management | Motadata
Atụmatụ, Mezue, Sochie, na Wepụta Ọrụ site na Otu Ebe Arụ Ọrụ na IT Project Management Software.
Wepụta nsonaazụ ya Ngwá Ọrụ Njikwa Ọrụ IT
Motadata ServiceOps ITSM Platform's Project Management nwere ike inyere gị aka ijikwa ọrụ gị nke ọma, na-enyere gị aka idozi okwu ngwa ngwa.
Hazie, hazie ma jikwaa ngwa ngwa Ọrụ IT
Hazie ma jikwaa usoro ndụ mmepe zuru oke nke ọtụtụ ọrụ IT site na ikpo okwu ITSM gị iji hụ na nkwekọ na ntụkwasị obi.
Ntụgharị atụmatụ atụmatụ ọrụ iji kọwapụta ihe dị mkpa na ọrụ
Otu n'ime ụgbọ mmiri
Ọnụ ego njikwa
Mbelata ihe ize ndụ ọdịda
Mee n'enweghị nsogbu Ihe oru ngo niile
Jiri nlezianya nyochaa ọganihu n'ozuzu nke oru ngo ma soro ọrụ ndị mmadụ n'otu n'otu iji nọrọ na nhazi oge na njikwa ego maka mmezu oru ngo ka mma.
Nkwado chaatị Gantt
Njikwa ọrụ iji nyochaa ọganihu ọrụ na ịchọpụta ndabere ọrụ
Mmekọrịta ka mma
Jiri nghọta nweta nghọta Nchịkọta oru ngo
Nweta visibiliti ozugbo n'ime ọkwa oru ngo, onye nwe oru ngo, mmecha pasentị, na ụbọchị ruru maka ibuga oru ngo n'ofe otu.
Nleba anya oru ngo
Akụkọ oru ngo na dashboards
Meziwanye afọ ojuju ndị ahịa
Kwado ndị otu aka imekọ ọnụ, hazie na bute ọrụ ụzọ, wee jiri sistemu njikwa ọrụ anyị rụkwuo ya.
Njikọ na usoro ITSM ndị ọzọ
Jikọọ akụ IT, ihe omume, na mgbanwe iji soro igbu oge ọrụ yana mee mkpebi dabere data.
Kwado nzikọrịta ozi gbasara ọnọdụ yana ikesa akwụkwọ n'etiti ndị otu ọrụ na ikpo okwu imekọ ihe ọnụ.
Supportma Ọkwa nkwado
Zipu ọkwa n'aka ndị nwe oru ngo na ndị isi ihe maka mmelite ọ bụla gbasara ọnọdụ ọrụ a.
Kedu ụdị isi usoro njikwa oru ngo?
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụdị njikwa ọrụ, isii ndị a na-ahụkarị bụ - Waterfall, Agile, Scrum, Kanban, Lean, na Six Sigma.
Nlekọta oru ngo Waterfall bụ otu n'ime ụzọ kacha ochie na nke dị nwayọ nke gụnyere ịrụ ọrụ na ebili mmiri ebe ọkwa ọ bụla dabere na nke dị n'ihu ya. Yabụ, ọ bụrụ na achọpụtara nchinchi n'oge na-esote usoro a, aga-emegharị usoro ndị mbụ.
Agile bụ mgbanwe mgbanwe na ngwa ngwa karịa usoro mmiri mmiri na-agụnye ịrụ ọrụ na obere iberibe, ma ọ bụ sprints, na-enyere ọrụ aka ịmalite dị ka achọrọ.
Scrum bụ ngwa ngwa ngwa nke agile na-elekwasị anya na iji sprints iji rụchaa ọrụ na obere chunks, n'ozuzu na usoro iheomume otu ọnwa.
Kanban bụ mgbanwe ọzọ nke agile na-elekwasị anya na ọnụọgụ ọrụ dị na usoro ọ bụla yana otu esi eme ka ha dị mfe, belata, wdg.
Nlekọta anya dị ka Kanban n'ihe gbasara elekwasị anya na usoro, mana ọ na-etinye aka na otu esi ewepụ usoro iji nye ahụmahụ kachasị mma, nke akụ na ụba na nke oge maka ndị ahịa.
Usoro isii Sigma na-emesi ike ịkwalite ogo mmepụta nke ọrụ na-elekwasị anya na afọ ojuju ndị ahịa.
Kedu ọrụ dịịrị onye njikwa ọrụ?
Onye njikwa oru ngo na-ahụ maka nhazi, ịzụrụ ihe, mmezu ya na mmezu nke otu ọrụ.
Onye njikwa oru ngo na-amalite site n'ịkwado oke ọrụ a na ịhazi ya na ndị nwere oke iji tọọ atụmanya. Na-esote, ọ na-akọwapụta atụmatụ oru ngo dabere n'ókè a kwadoro na ihe ndị a ga-enyefe, nke ga-agụnye mmefu ego ọrụ, mkpa akụrụngwa na oge.
Usoro ndị na-esote gụnyere ime nyocha ihe ize ndụ, nyochaa oge na akụrụngwa iji chọpụta nkwụsịtụ nwere ike tupu ha aghọọ nsogbu, ịzaghachi mgbanwe ngwa ngwa na mgbe ha mere, na n'ikpeazụ ịmepụta ihe ndị a tụrụ anya ya, na nhazi oge, na n'ime mmefu ego.
Mgbe arụchara ọrụ ahụ, onye na-ahụ maka ọrụ na-emepụta ma na-enyocha akụkọ ọrụ iji tụnyere ha na ọrụ ndị gara aga, na-ekweta ebe ndị otu ahụ na-eme nke ọma, na-akọwapụta mpaghara ebe a ka nwere ohere maka itolite, ma na-eme nhọrọ ndị dabeere na data.
Kedu ihe njikwa oru ngo dị mkpa na ITSM?
Ebumnuche ITSM, dị ka njikwa oru ngo, na-enweta afọ ojuju onye ọrụ site na mkpebi na mmechi ihe omume, mmezu arịrịọ ọrụ, mmejuputa mgbanwe na ihe ndị ọzọ n'ime oke akọwara, usoro iheomume, ọnụ ahịa na ihe dị mma. Yabụ, njikwa ọrụ nwere ike bụrụ akụkụ dị mkpa nke njikwa ọrụ IT.
Nlekọta mgbanwe nhazi dị oke mkpa maka ọganihu ọ bụla. N'ihi na ITSM bu n'obi ibuga ọrụ IT dị elu na ọnụ ahịa dị ala, a ga-ejikwa nlezianya mee mgbanwe iji zere imebi nkwụsi ike na ọrụ nke sistemụ IT. Nke a bụ ebe njikwa oru ngo ga-enyere aka idobe mmefu na-enweghị isi n'ahịrị ma na-aga n'ihu na-agbanwe ihe ndị ahịa chọrọ.